Acute gastritis - လက္ခဏာများ
စူးရှသော gastritis ၏ရောဂါလက္ခဏာများဟာအစာအိမ် mucosa ရောင်ရမ်းခြင်း၏နောက်ခံတွင်ပေါ်လာ။ ရောဂါ၏ဤပုံစံကွဲပြားခြားနားသောလိင်နှင့်အသက်လူနာဖြစ်ပေါ်နိုင်။ နာမကျန်းရုတ်တရက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့်အတော်လေးခဲယဉ်းသောအရပ်ကြာပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏မြို့ရိုးပေါ်မှာကိုယ်တော်ကြောင့်အတော်များများကလူနာတောင်မှတိုက်စားမှုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်သွေးထွက်စတင်နေကြသည်။
စူးရှသော gastritis အစာအိမ်၏လက္ခဏာများ
gastritis မကြာခဏစိတ်ဖိစီးမှု, ဓာတ်မတည်နှင့်ကူးစက်ရောဂါအဆုံးသတ်ရေး, ဆိုးရွားသောဂေဟစနစ်အခွအေနေအထိအချက်များအမျိုးမျိုးနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။ အတိအကျရောဂါဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောအရာပေါ် မူတည်. ရောဂါလက္ခဏာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စူးရှသော gastritis ၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာ - အစာစားချင်စိတ်များနေတဲ့ချွန်ထက်ယိုယွင်း။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်သက်ရှိအနုတ်လက္ခဏာအချက်ထိတွေ့ပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လူနာသည်, မိမိပါးစပ်၌သူ၏ညှဉျးဆဲမကြာခဏမကောင်းတဲ့အရသာခံစားရရန်စတင် burping ။ အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ဝေဒနာရှိပါတယ်။ တခါတရံနာကျင်မှုသူတို့ပင်အချို့သောအချိန်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး immobilize များ၏အင်အားသုံးအောက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့နိုင်ပါတယ်။
စူးရှသော gastritis နှင့်အခြားရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်လိုက်ပါသွား:
အဖြူရောင်သို့မဟုတ် grayish ၏ဘာသာစကားကိုအတွက်ပညာရေး ပြား ;
ပြင်းထန်သော salivation (တစ်ခါတစ်ရံလည်း gastritis လူတစ်ဦးသောခြောက်သွေ့တဲ့ပါးစပ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပျက်ပေမယ့်);
စူးရှသော hemorrhagic gastritis ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခဲ့လျှင်, ရောဂါဝမ်းလျှော, အစာအိမ်ညျးသံဖြင့်လိုက်ပါသွားနှင့်အမှတ်အသားများ subfebrile မှအပူချိန်ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပါသည်။
စူးရှသော gastritis ၏ကုသမှု
ကုထုံးရောဂါ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာစတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အမှု၌, တကအစားအစာပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ လူနာရဲ့ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေ၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်စားကန့်သတ်ရန်ရန်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်များတွင်သာပျော့ပျောင်းသောအစားအစာများကိုစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပေါင်းသို့မဟုတ်ဂရုတစိုက်ဖွာနေသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်လူနာဒိန်ချဉ်, မီးဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများ, ဒိန်ခဲနှင့် ပို. ပင်အစာရှောင်ခြင်းအစာအာဟာရကိုမပေးနိုငျသညျ။
gastritis ယခုအချိန်အထိကြောင့်အစာအိမ် mucosal အနာပေါ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်သှားလြှငျ, ကုသမှုနှင့် Hydrochloric acid ကို၏လျှော့ချထုတ်လုပ်မှုမှပံ့ပိုးထိုး၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော sucralfate နှင့် Venter အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်လျင်မြန်စွာခန္ဓာကိုယ်အကာအကွယ် plenochkoj ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်မှုလျင်မြန်စွာအနာပျောက်စေသောအဖို့အထောက်အကူ။
Flucostat - စျေးနှုန်းချိုသာ counterparts တွေကို
ဝဲ - လက္ခဏာများ, ကုသ
Hepatic မလုံလောက် - ရောဂါလက္ခဏာ
နီးလ်ပက်ထရစ် Harris ကတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလက်ဆောင်တစ်ခုရတယ်
အိမ်မှာသို့မဟုတ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ၌သင်တို့၏အံသွားအောငျလုပ်နည်း - အံသွား whitening?
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ပန်းကန် spinning မဟုတ်ပါ - ဘာလုပ်ရမှန်း?
အမျိုးသမီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခြုံငုံ - 30 အရှိဆုံး, စတိုင်လှပနွေးမော်ဒယ်များယခုရာသီ
လူငယ် - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ရောဂါအန္တရာယ်ရှိမရှိနှင့်ဘယ်လိုကုသ - ပန်းရောင်ကလေးတစ်ဦးအတွက် zoster?